विदेशमा धन कमाउनको लागी गएको श्रीमान लाई श्रीमतीले घात गर्दाको पिडालाई गीतमा समेटिएको “घर बिगारा २ ” (भिडियो सहित) – Complete Nepali News Portal
विदेशमा धन कमाउनको लागी गएको श्रीमान लाई श्रीमतीले घात गर्दाको पिडालाई गीतमा समेटिएको “घर बिगारा २ ” (भिडियो सहित)
काठमान्डौ – बिस्व अहिले कोरोना भाइरसको महामारीमा फसेको छ । यो अवस्थामा पिंडा सबैलाई भएता पनि आफ्नो देशको चिन्ता अलि बढी सबैलाई हुने गर्दछ । हाम्रो देश नेपाल, जहाँ गरिबीको कारणले धेरै नेपालीह? पर्देशिन बाध्य बनेका छन् । राज्यले ब्यरोजगारी समस्याको समाधान गर्नुको सट्टा अहिलेको सक्रमणको घडीमा बाध्यता बस परदेशिएका नेपालीह?लाई उद्धार गर्न समेत नसकिरहेको गुनासाह? सुन्न सकिन्छ ।